काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणको बढ्दो ग्राफ, सरकारसँग छैन कुनै रणनीति – AayoMail
काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणको बढ्दो ग्राफ, सरकारसँग छैन कुनै रणनीति
आयाेमेल संवाददाता २०७७ साउन २१ गते १९:२५
लकडाउन खुलेको पहिलो दिन साउन–७ गते काठमाडौं उपत्यकामा तीनजनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तर, साउन २१ अर्थात आज (बुधबार) एकै दिन ६२ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो।
दुई सताको अवधिमा मात्रै उपत्यकामा ४ सय ३६ जना संक्रमित थपिएका छन्।
लकडाउन खुला गरेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर चुलिँदै गएको छ। हालसम्म उपत्यकामा ८ सयभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांक छ।
संक्रमण देखिने अधिकांश मानिसहरू तराई जिल्लाबाट आएका छन्। जसमा कपाल काट्ने, मजदुरी गर्ने, तरकारी तथा फलफूल बेच्ने जस्ता व्यक्तिहरू बढी रहेका महाशाखाले जनाएको छ।
कोरोनाको ‘हटस्पट’ बन्दै उपत्यका
तराईका जिल्लाबाट मानिसहरूको आवागमन बढेपछि काठमाडौं कोरोनाको हटस्पट बन्ने खतरा बढेको छ। दिनहुँ सयौंको संख्यामा मानिसहरू काठमाडौं छिर्ने गरेका छन्। तर, उनीहरू सबैको परीक्षण हुन सकिरहेको छैन।
उपत्यका बाहिरबाट आएका मानिसहरू परीक्षण बिनै खुलेयाम बजारमा डुलेरहेका छन्। जसले गर्दा केही दिनभित्रै कोरोनाले भयावह रुप लिने विज्ञको जनाउँदै आएका छन्। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले उपत्यका प्रवेश गर्ने सबैको स्वाब नाकामै संकलन भएर जतिसक्दो चाँडो परीक्षण हुनुपर्ने बताए।
बाहिरी जिल्लाबाट आउने यातायातले नाकढुंगा वा साँगाको चेक पोस्टबाट करिब १ किलोमिटर पर नै यात्रुलाई छोड्ने गरेको स्थानीएको गुनासो छ। साँगामा सधै यस्तै दृश्य देख्छन् स्थानीय विकास विष्ट।
सरकारले उपत्यका भित्रिने यात्रुलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको विष्टको गुनासो छ। ‘एक किलोमिटर उतै छोडिएका यात्रु हिड्दै नाका पार गर्छन् र अर्को बसमा उपत्यका भित्रिन्छन्’, उनले भने।
उपत्यका भित्रिने नाकाबाट परीक्षण गरेर वा १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र प्रवेश गराएको भए सायद यो अवस्था आउने थिएन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यका भित्रिने नाकामा गरेको संकलित नमुनाको परीक्षण मै धेरै जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नाकाबाट प्रवेश गर्ने दश हजार आठ सय जनाको नमुना परीक्षण गर्दा ४० जनामा कोरोना देखिएको छ।
सीमा नाकाबाट छिर्ने नागरिकको टेस्ट र कन्ट्याक ट्रेसिङ नगर्दा एक व्यक्तिबाट संक्रमण समुदायमै फैलिने जोखिम बढेको डा. सुवेदीको भनाई छ।
‘संक्रमितको परिचाहन भएपछि उसको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्रायक टेसिङ गर्नुपर्छ। रिर्पोट नआउँदासम्म क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ’, डा. सुवेदी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म उपत्यकामा देखिएका आधाभन्दा बढी संक्रमितलाई ट्रेसिङ गरिएको छैन। धेरै संक्रमितको सम्पर्क स्रोतसमेत छैन।’
उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि संक्रमितलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौति दिनहुँ थपिदो छ।
प्रदेश नम्बर २ बाट काठमाडौं छिर्नेमध्ये धेरैजना काभ्रे र भक्तपुरको साँगाहुँदै आएको महाशााखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे बताउँछन्।
उपत्यकाका कोरोना अस्पतालका सबै बेड भरिएका छन्। ‘लक्षण नभएका व्यक्तिलाई घरमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेका छौ। उपत्यकामा बेड अभावले संक्रमितलाई कहाँ राख्ने भन्ने निकै गाह्रो छ,’ पाण्डेले भने।
उनका अनुसार उपत्यकाका कपन, बल्खु, बुढानिलकण्ठ, शंखमूल, कालीमाटी, नख्खु, साथै भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा संक्रमण देखिएको छ।
‘नाकामा परीक्षण भएर केहि व्यक्ति काठमाडौं छिरे, गाडी चालकलगायतका व्यक्ति बाहिरि जिल्ला नै फर्किएका छन्’, डा. पाण्डेले भने, ‘कतिपय मानिसले गलत नम्बर दिँदा वा संक्रमितको थाहा पाएपछि फोन नै अफ गरेर बसिदिँदा ट्रेसिङ गर्न थप समस्या भइरहेको छ।’
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा . भीम आचार्य उपत्यकामा भित्र–भित्रै संक्रमण फैलिसकेको बताउँछन्। ‘बोटो हिड्ने जो कोहीलाई पनि परीक्षण गर्दा मात्र समुदायमा कति मात्रामा फैलिएको भन्ने थाहा हुन्छ’, डा, आचार्य भन्छन्, ‘एकैठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बसेका हिँडिरहेको पोजेटिभ आउने संख्या र बाटो हिँडिरहेका मानिसको पोजेटिभ आउने सम्भावना फरक भए पनि फरक कुराको संकेत गर्छ।’
उपत्यकामा संक्रमणको उक्लिदो तथ्याङ्क
सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेको दोस्रो दिन अर्थात साउन ७ गते देशभर गरिएको ३ हजार ७ सय ७९ परीक्षणमा उपत्यकामा ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
त्यस्तै, उपत्यकामा साउन ८ गते ९ जना, साउन ९ गते १० जना, १० गते ३ जना, ११ गते ८ जना र १२ गते ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
साउन १३ गतेपछि उपत्यकामा संक्रमितको संख्या ह्वातै बढेको छ। १३ गते मात्रै ५३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको इडिसिडीको तथ्यांक छ।
त्यस्तै, १४ गते २० जना र १५ गते ४५ जना संक्रमित थपिए। साउन १६ गते ३८ जना, १७ गते ६ जना, १८ गते ३१, १९ गते ६२, २० गते ८० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
इडिसिडीको मंगलबारसम्म तथ्यांकअनुसार काठमाडौं जिल्लामा मात्रै ५ सय ४१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भक्तपुर जिल्लामा ७७ जना र ललितपुरमा १ सय २० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
काठमाडौंमा महामारी फैलिनबाट रोक्न सरकारले अहिलेदेखि नै नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने पर्ने डा. आचार्य बताउँछन्। भयावह अवस्था आएपछि मात्र लकडाउन गर्नुभन्दा केहि समयका लागि नाकाबाट प्रवेश रोक लगाउनु नै उपयुक्त हुने उनको भनाई छ। आएकाहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने उनले बताए।
भारतमा नियन्त्रण नभएसम्म नेपालमा जोखिम कायम नै रहेको डा. पाण्डेको बुझाई छ। ‘नाकामा सुरक्षा व्यवस्था जति कडा बनाएपनि मानिसहरू चोर बाटोबाट छिरेर आउने गरेका छन्’, डा. पाण्डे भन्छन्, ‘लकडाउन खुलेपछि कोरोना नियन्त्रण भएको भन्ने जनमासमा भ्रम परिरहेको छ। जुन भ्रम जनमासमा चिर्ने आवश्यक छ।’
सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका वा केहि व्यक्तिको जिम्मेवारीभन्दा पनि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाटद सावधानी अपनाउनु पर्ने उनको भनाई छ।